Ny lisitra siny fisotro sy fisotroana Co Kildare faratampony - IntoKildare
Fitsidihana voalohany, Food & Drink
Isan'andro dia ny zoma vaovao rehefa hisakafo any ivelany, mikapoka ny pub na miala sasatra fotsiny aorian'ny asa.
Kildare dia nivadika ho lasa tavy mafana-tsiro misy tsiro sy safidy, miaraka amin'ny fipoahan'ny trano fisakafoanana ambony sy bara.
Mazava ho azy fa tsy afaka mitanisa azy rehetra eto izahay fa afaka manome anao vitsivitsy monja mba hanamarihana ny lisitry ny siny!
Lahatsoratra zarain'i FIRECASTLE (@firecastle_kildare)
Na lasopy sy karazana sakafo atoandro sandwich na dite eran'ny kaopy misy fifampiresahana, Firecastle ao Kildare no nanafenana anao! Tena mamporisika anao izahay ny hanampy ny Poké Bowls matsiro ao anaty lisitry ny siny sakafo mandritra ny any Kildare. Mampanantena izy ireo raha vao manandrana ianao dia hiverina bebe kokoa ary manaiky tanteraka izahay!
Lahatsoratra iray nozarain'i Auld Shebeen (@theauldshebeenathy)
Tsy afaka nanao lisitra siny fisakafoanana sy fisotro farany izahay ary tsy nampidirina Ny Auld Shebeen ao amin'ny Athy. Mamelombelona toy inona ireo? Izy ireo aza dia manandrana mifangaro tsara kokoa amin'ny Pizza Namboarina Namboarina tamin'izy ireo na ny elatra akoho malaza Crispy, ny Auld Shebeen dia manana izay ilainao amin'ny sakafo tonga lafatra.
Lahatsoratra iray nozarain'i Fallons of Kilcullen (@fallonsofkilcullen)
Ity misy iray ho an'ireo tia fromazy any! Fallons, Natolotry ny praiminisitra Kildare, Michelin, ny traikefa momba ny sakafo vao tsy ela izay nanisy an'ity lovia Burrata mahatalanjona ity miaraka amin'ny voatabia sy voatabia lova ho an'ny sakafo fisakafoanana alahady teo. Fallons dia tsy manana trano fisakafoanana mahafinaritra fotsiny fa koa fisotroana bar sy faritra hipetrahana.
Trano fisakafoanana Cook roa sy fisotro misy divay
Lahatsoratra zarain'ny TwoCooks (@twocooks_sallins)
Ny fahalavorariana ara-tsakafo ao Sallins avy amin'ny ekipa mpivady dia midika hoe mihinana sakafo roa sosona! Ny lalàna mifehy ny fizaran-taona ao amin'ity trano fisakafoanana ity dia mibaiko ny legioma sy ny lovia eo amin'ny menio, izay tsy mitovy amin'ny trondro vaovao ka hatrany amin'ny safidin'ny legioma, izay natolotra tamim-pifaliana. TwoCooks dia misokatra manomboka ny 24 septambra ary mandray famandrihana izao ka aza hadino ny mahazo ny famandrihanao!
Classical tanteraka, Manidy 13 Crispy Potato Skins feno hetaheta Dubliner Red Cheddar, bacon Irlandy crispy, tongolo lohataona ary nasiana saribakoly sakay mamy dia tsy maintsy tafiditra tao anaty lisitry ny siny sy siny Kildare. Any Sallins, Lock 13 Brew Pub no misy ny Kildare Brewing Company. Maninona raha atambatra amin'ny iray amin'ireo Pale Ales, IPA na Lagers azy ireo ny lovia matsiro azy ireo? Miaraka amin'ny faritra fisakafoanana ivelany tsy mampino, fitsangatsanganana labiera ary fanandramana labiera dia traikefa tsy azo hadinoina io!
Fitsidihana voalohanyFood & Drink